Ukupheka i-muffins: zokupheka kunye nezithombe
Ukupheka kwii-mufins ezihle kakhulu
Ii-Muffins - i-keksiki encinci, ezibhakabhileyo ezizodwa, ezincinci kwiibumba. Uninzi luyancipha, kodwa lunokulungiswa njengentlanzi, umzekelo, amaqanda, i-bacon, i-parmesan, isipinashi kunye neminye imikhiqizo. Yonke into incike kwi-imagination yomphathikazi. Zikhethele naluphi na u-pamper abathandekayo bakho kunye neentombi kwiimfene ezimnandi, iindlela zokupheka esizifumanayo.
Iindlela zethu zokupheka kunye nesithombe sokupheka ama-muffins ekhaya:
Iimon muffins kwi-yogurt
I-muffins ye-tshokolethi yinto ehlukileyo kakhulu kule dessert. Abayithandi kuphela abantwana, kodwa nabadala. Masifunde indlela yokwenza i-cococi necocoa.
umgubo - 175 g
iqanda - 1 iqhekeza
ubisi - 150 ml
ushukela - 100 g
i-cocoa - 45 g
ioli yemifuno - 60 ml
i-powder baking - 10 g
ityuwa - 2 g
ubetha iqanda kunye nomxube kwaye ungeze ioli yendalo. Ukudibanisa ngokupheleleyo;
i-sifted flour, cocoa, ityuwa, iswekile kunye ne-baking powder, yongeza kwixube leqanda. Thina sixolela ngokuvumelana ngokufanayo;
ukubeka umxube ekubunjeni okulungiselelwe, kutyutywe ngeoli. Bhaka kwi-degrees ezingama-200 ukuya kwi-20-25 imizuzu.
I-Recipe ye-banana muffins
Kwaye le recipe ye-mufins - eneziqhamo ezintle. Emva kwakho konke, intsapho yakho nayo ifana namabhanana, aqhelekile, kunokuba ziqhamo zendalo?
umgubo - 2.5 iikomityi
iqanda - 2 iziqwenga
iibhanana - iziqwenga ezimbini
ushukela werhasi - 1/5 indebe
isetyiti yeeshukela - 4/5 indebe
i-powder baking-2 tsp.
I-Butter - 100 g
nyibilike ibhotela, xuba noshukela;
engeza kumxube otywetshiwe, amaqanda kunye nephoyi yokubhaka;
Gxotha amabhanana ngemfoloko kude kube lula kwaye ungeze kwi-dough yenani. Isiphumo esifanele sibe yintambo emfutshane;
uze uthele inhlama yebhanana kwiibhoksi zokubhaka kwiifomfini;
iibhekeki zibhaka ehovini imizuzu engama-40 kwiqondo lokushisa lama-degrees ama-200.
I-Recipe ye-curf i-curf muffins
Iba yiyona dessert enomdla kakhulu kwaye iluncedo. Kwaye ukuze iidemon ezincinane zizame ukucoceka, qiniseka ukuba zihombise i-muffins eyenziwe ngokulungelelanisiweyo kunye nama-berries: i-raspberries, i-strawberries okanye i-cherries.
umgubo - 200 g
i-cottage cheese - 200 g
I-Butter - 150 g
i powder baking - 1 tsp.
gubha i-cottage shizi nge sihlunu de ibe yinto epholileyo;
Whisk amaqanda kunye noshukela. Kulapho sifaka ioli, i-powder baking. Ukudibanisa ngokupheleleyo;
koko wongeza i-cottage ushizi kunye nomgubo kumxube;
kunye novavanyo olufunyenweyo sizalisa iibumba;
bhaka nge 10-15 imizuzu kwiqondo lokushisa lama-180 degrees;
wakhonza etafileni, ehlotshiswe ngamajikijolo kunye nekhilimu ehlutshiwe.
Ama-Mufini asebenza kakuhle ngaphandle kokuvavanywa kwesiqhelo. Iindwendwe ezininzi zinqwenela ukuhluka kwee-muffins kwi-kefir, ingakumbi ukuba i-lemon isetyenziswe ngexesha lokupheka. Efanelekileyo kulabo abangathandi iilekese ezininzi.
ioli yemifino - 1 iglasi
imvubelo - 1.5 tsp.
gubungela i-peel ye-lemon kangangokuba iphetshana 1-2 iifuni zeeyi;
ukubetha umxube weqanda kunye noshukela;
Yongeza ioli yongxube yeqanda, i-juice emontiweyo kunye ne-lemon eyisiqholo. Ukudibanisa kunye nokongezwa kwezinto ezihlala zihlawulela kwi-revs;
ukuxuba umgubo kunye nembiliso. Phakamisa ingxube yeqanda uze udibanise ngokucacileyo kude kube lula;
Ekugqibeleni, sifaka i-kefir kwisihlama, sidibanise kwakhona kwaye udibanise inhlama ibe yi-molds;
kufakwa kwi-ovini, ifuthe kwi-degrees ezingama-200, imizuzu engama-25. Amanfini kufuneka aphakame;
I-dessert eyenziwe ngokulungelelanisiweyo inikezelwa ngesibindi kuzo zombini neendwendwe.
Ukupheka kweefomfini ezihlwaya zinokuqulatha phantse naziphi na izithako. Ziyakwazi kokutya kunye neshokoleta enentliziyo. Olu hlobo lokudla luya kuthotyiswa ngabantu abadala kunye nabantwana. Zama kwaye awuyi kuzisola!
Ukupheka kweeVideos: Indlela yokupheka i-Muffins ekhaya
I-Compote yezithelo ezomileyo - iresiphi yesiselo esilungileyo
Ukupheka okumnandi kunye neyokuqala kunyaka omtsha
Ubugcisa beklabishi ye-salting ekhaya
Ukupheka kwezitya ezidliwayo zokutya
Mhlawumbi i-seagull? Uncedo kwaye uyamnandi
Ukususa iifowusi - zokupheka zokuhle kwezandla zakho
Uyise okhulelwe uJulia Snigir akafuni ukuva ngoVevenia Tsyganova
Umntwana ukwesaba ukuthetha nabaphulaphuli
Aloe ukusuka kubanda kubantwana
Inkukhu kunye nemifuno kwi-grill
Ngaba ndihlala ndidibana nabantwana emva komtshato?
Yintoni endiyenzayo ukuba ndibuyisele intanda yam?
Ukuphucula ukuxilwa kwamadoda kuba yindlela efanelekileyo yokuphelisa
Ubuhle kunye nentyatyambo: yintoni enokugqoka iimfesane zamantombazana
Isaladi isardidi kunye neerothi